Travel Medical Kit - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခရီးသှားနခြေိနျ ကနျြးမာရေးပွသနာတဈစုံတဈရာပေါပေါကျလာရငျ အပွညျ့အဝမပြျောနိုငျတော့ပါဘူး။ပိုဆိုးတာက အနီးအနားမှာ ဆေးရုံဆေးခနျးဆေးဆိုငျတှပေါ မရှိဘူးဆိုရငျပိုဒုက်ခရောကျရပါတယျ။
ခုနောကျပိုငျး မိသားစုတှေ သူငယျခငျြးအုပျစုတှေ couple လေးတှေ စသဖွငျ့ လူအတျောမြားမြား ခရီးတိုတှေ ခရီးရှညျတှေ မကွာခဏဆိုသလို အသှားမြားလာတာလညျးတှရေ့ပါတယျ။
မကွာခငျမှာလညျး ရုံးပိတျရကျရှညျတှေ ရောကျလာတော့မှာမို့ အတျောမြားမြားခရီးသှားဖို့ ပွငျဆငျနကွေပွီထငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ခရီးသှားနရေငျးလမျးမှာဖွဈစေ.. ဆေးရုံဆေးခနျး အလှမျးဝေးတဲ့နရောဒသေမှာဖွဈစေ …. ကနျြးမာရေးပွသနာ တဈစုံတဈရာပျေါပေါကျက အဆငျပွစေရေနျ အောကျပါဆေးနဲ့ ဆေးပစ်စညျးလေးတှေ ဆောငျသှားစခေငျြပါတယျ…
– Paracetamol 500mg(အကိုကျအခဲပြောကျဆေး)
– Ibuprofem 400mg(အကိုကျအခဲပြောကျဆေး)
– Kremil – S ပနျးရောငျ or Konimag (ဗိုကျအောငျ့ဗိုကျနာ)
– ORS (Oral Rehydration Salt,BPI ဓာတျဆား)
– Loperamide (ဝမျးပိတျဆေး)
– Drammine (Dimenhydrinate)
– Cetirizine 10mg ( နှာစေးခွငျး ,ဓာတျမတညျ့ခွငျး)
– Detussin (ခြောငျးဆိုးပြောကျဆေး)
– Degirol ငုံဆေးပွား ( လညျပငျးနာခွငျး)
– Saline eyedrop (မကျြစဉျး)
-ရှားစောငျးလပတျ gel ( ( Aloe Vera Gel) (အသားနလေောငျခံရလြှငျလိမျးရနျ)
-ကတျကွေးအသေး (ပတျတီး စသညျ ညှပျရနျ)
ဆေးတှဘေယျလိုသောကျရမယျ ဘယျနကွိမျသောကျရမယျဆိုတာကတော့ လူရောဂါ ကနျြးမာရေးအခွအေနပေျေါမူတညျတာမို့ ခုနောကျပိုငျးခတျေစားလာတဲ့ အှနျလိုငျးကတဈဆငျ့ ကနျြးမာရေး ဆှေးနှေးဖို့ဝနျဆောငျမှုပေးခွငျးမြား၊ဖုနျးကတဈဆငျ့ ကနျြးမာရေး ဆှေးနှေးပေးခွငျးမြား စသညျ့ Centre မြားမှ ဆရာဝနျမြားနှငျ့
အခုအပျေါမှာဖျောပွထားတဲ့ ဆေးနဲ့ဆေးပစ်စညျးတှကေ ပုံမှနျကနျြးမာရေးပွသနာမရှိသူမြား အတှကျသာဖွဈပွီး ကနျြးမာရေးပွသနာ (သို့)ရောဂါအခံတဈခုခုရှိသူမြားကတော့ ခရီးမသှားမီကတညျးက သကျဆိုငျရာ ပွသနကေဆြရာဝနျနဲ့ဆှေးနှေး တိုငျပငျပွီး ရောဂါအလိုကျလိုအပျတဲ့ ဆေးတှသေယျဆောငျသှားဖို့ အကွံပေးပါရစနေျော။
ခရီးသွားနေချိန် ကျန်းမာရေးပြသနာတစ်စုံတစ်ရာပေါပေါက်လာရင် အပြည့်အဝမပျော်နိုင်တော့ပါဘူး။ပိုဆိုးတာက အနီးအနားမှာ ဆေးရုံဆေးခန်းဆေးဆိုင်တွေပါ မရှိဘူးဆိုရင်ပိုဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်း မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းအုပ်စုတွေ couple လေးတွေ စသဖြင့် လူအတော်များများ ခရီးတိုတွေ ခရီးရှည်တွေ မကြာခဏဆိုသလို အသွားများလာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
မကြာခင်မှာလည်း ရုံးပိတ်ရက်ရှည်တွေ ရောက်လာတော့မှာမို့ အတော်များများခရီးသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ခရီးသွားနေရင်းလမ်းမှာဖြစ်စေ.. ဆေးရုံဆေးခန်း အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာဒေသမှာဖြစ်စေ …. ကျန်းမာရေးပြသနာ တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်က အဆင်ပြေစေရန် အောက်ပါဆေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်းလေးတွေ ဆောင်သွားစေချင်ပါတယ်…
– Paracetamol 500mg(အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး)
– Ibuprofem 400mg(အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး)
– Kremil – S ပန်းရောင် or Konimag (ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ)
– ORS (Oral Rehydration Salt,BPI ဓာတ်ဆား)
– Loperamide (ဝမ်းပိတ်ဆေး)
– Cetirizine 10mg ( နှာစေးခြင်း ,ဓာတ်မတည့်ခြင်း)
– Detussin (ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး)
– Degirol ငုံဆေးပြား ( လည်ပင်းနာခြင်း)
– Saline eyedrop (မျက်စဉ်း)
-ရှားစောင်းလပတ် gel ( ( Aloe Vera Gel) (အသားနေလောင်ခံရလျှင်လိမ်းရန်)
-ကတ်ကြေးအသေး (ပတ်တီး စသည် ညှပ်ရန်)
ဆေးတွေဘယ်လိုသောက်ရမယ် ဘယ်နကြိမ်သောက်ရမယ်ဆိုတာကတော့ လူရောဂါ ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်တာမို့ ခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေးဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများ၊ဖုန်းကတစ်ဆင့် ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေးပေးခြင်းများ စသည့် Centre များမှ ဆရာဝန်များနှင့်
အခုအပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေက ပုံမှန်ကျန်းမာရေးပြသနာမရှိသူများ အတွက်သာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးပြသနာ (သို့)ရောဂါအခံတစ်ခုခုရှိသူများကတော့ ခရီးမသွားမီကတည်းက သက်ဆိုင်ရာ ပြသနေကျဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပြီး ရောဂါအလိုက်လိုအပ်တဲ့ ဆေးတွေသယ်ဆောင်သွားဖို့ အကြံပေးပါရစေနော်။